Ndị Channels Television na-ekwu n'aka na-achị Steeti Edo, bụ Adams Oshiomole, enyela ndị uwe ojii nanị mkpụrụ ụbọchị 14 ka ha were chọpụta ndị gburu Oyerinde Olaitan, onye ndụmọdụ pụrụ iche Oshiomole, yana akawe ukwu ya.
E gbuola mmadụ 45 na Steeti Nasarawa
Ozi anyị nwetere site n’aka ndị Guardian nke ala Nigeria na-ekwu na tigbuo zọgbuo na-ada n’etiti ndị obodo Eggon na ndị Gwandere na Steeti Nasarawa. Anyị nụrụ na e gbuola mmadụ iri ano n’ise n’agha ahụ agbụrụ abụọ ndị a na-ebuso onwe ha. Anyị nụrụ n’agbụrụ abụọ ndị a na-azọ ala.
Akuko ndi Voice of Nigeria, Jenuwari 22, 2013
Igbo Service, Voice of Nigeria
Akụkọ ndị Voice of Nigeria, nke Chibuzo Nwanedo wetere gị.
Akuko ndi Voice of Nigeria, Juunu 14, 2013
Akụkọ ndị Voice of Nigeria, nke abali 14 nke onwa juunu afo 2013.
Akụkọ ndị Voice of Nigeria, nke Ijoema Okparaeke na Franklin Olua wetere gị.
Akuko ndi Voice of Nigeria, Maachi 4, 2013
Akụkọ ndị Voice of Nigeria, nke Francis Nwoha wetere gị.
Ndị EFCC, ngalaba na-ahụ maka ịchụ nrụrụ-aka na iri-ngo ọsọ na Nigeria, jidere onye bụbu onye isi oche ụlọ ọba ego etiti, Charles Soludo, ụnyahụ bụ Tọzdee.
Akụkọ ndị Voice of Nigeria, nke Oluoma Simon na Ijeoma Okparaeke wetere gị.
Boko Haram ekwuona na o bu hanwa gburu mmadu 22 na Steeti Plateau
Ndị Channels Television na-ekwu na ndị otu Boko Haram ekwuona na ọ bụ hanwa tụrụ ogbunigwe ahụ gburu mmadụ 22 na Steeti Plateau n’ụbọchị Sọndee. N’ime ndị nwụrụ anwụ gụnyere otu onye Sinetọ, nakwa otu onye omebe iwu ụlọ ọgbakọ etiti nke Steeti Plateau. Mana ndị ọrụ nchekwa na-ekwu na mkpamkpa ahụ si n’aka ndị na-alụ ọgụ agbụrụ.
Egbuola mmadụ abụọ ndị Boko Haram na Kano
Ndị Channels Television na-akọwa na mmadụ abụọ ndị otu Boko Haram anwụọla na Steeti Kanọ. Nke a mere ka ndị uwe ojii na ndị soja bagidere otu ebe mgbaba ndị otu ahụ n’ụbọchị Satọdee. Ụgbọala ndị Boko Haram ahụ kwara ogbunigwe nay a gbawara were gbuo mmadụ abụọ ndị ahụ. Ogbunigwe ahụ merụrụ mmadụ abụọ ndị soja ahụ.